गुगल डाक्टर !- विविधा - कान्तिपुर समाचार
डा. प्रवीण नेपाल
जेष्ठ १८, २०७६ डा. प्रवीण नेपाल, आर.पी. मैनाली
काठमाडौँ — जसरी चास्नीमा झिँगाहरू पर्छन्, त्यसैगरी अचेल हामी इन्टरनेटको जालोमा पर्न थालेका छौं । त्यहीँ रम्छौं त्यहीँ भुल्छौं । यसले हाम्रो ज्ञान परम्परा नै फेरिदिएको छ । सामान्यदेखि जटिल ज्ञान पनि हामी यसमै खोजिरहेका हुन्छौं । विज्ञान प्रविधिका साथसाथै चिकित्सा विज्ञानका अन्योल र कौतूहल पनि यसैलाई सोध्छौं ।
चिकित्सा विज्ञानबारे सामान्य वा सतही जानकारी लिन गुगल गर्नु जायज होला । तर त्यसकै आधारमा चिकित्सा प्रयोगका तौरतरिका अवलम्बन गर्नु, इन्टरनेटकै निर्देशनमा चल्नुचाहिँ कति उपयुक्त हो ? यसलाईछुट्याउन सक्नुपर्छ ।
इन्टरनेटमा उपलब्ध थोरबहुत सूचनाकै आधारमा कतिपय आफूलाई विज्ञ ठान्छन् । आफ्ना स–साना समस्या र झिनामसिना पीडामा पनि उनीहरू गुगलको शरणमा पर्छन् । यस्तो व्यक्ति जचाउन गइहाल्यो भने पनि चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधी किन्न र खान हिच्किचाउँछ । यसो गर्नु कदापि ठीक होइन । गुगलमा पाइने सबै किसिमका सूचना तपाईंको भूगोल, रहनसहन, जीवनशैली, शरीरको रासायनिक प्रक्रिया (चाय–पचाय), रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, रोगको अवस्था एवं प्रकृति र अन्य मनो–शारीरिक अवस्थामा पटक्कै मेल नखान सक्छन् । तपाईंका रोगका लक्षण एवं सङ्केत केवल तपाईसँग मात्रै मेल खान सक्छन् ।
एउटा व्यक्तिले पूर्ण सक्षम चिकित्सक बन्न दशकौँ विषयगत गहन अध्ययन, तालिम, कठिन परीक्षाकाखुड्किलाहरू पार गरेको हुन्छ । कार्यानुभव र प्रयोगको आवश्यकता पनि त्यतिकै पर्छ । चिकित्सा विज्ञानमा दिनानुदिन नयाँ–नयाँ आविष्कारहरू थपिँदै गएका छन् । नयाँ–नयाँ मानकहरू सिद्धान्तले परिलक्षित हुन्छ, नयाँ–नयाँ अनुसन्धान र प्रयोगबाट खारिएको हुन्छ । विज्ञान विकासको क्रमसँगै आ–आफ्नो विषयका विशेषज्ञ, चिकित्सक निर्देशित हुन्छन् ।
एउटा चिकित्सकले बिरामीलाई कुनै औषधी सिफारिस गर्नुपूर्व बिरामीको रोगको प्रकृति, गाम्भीर्य, अवस्था, बिरामीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, बिरामीमा पर्ने ‘साइड इफेक्ट’ सबै विचार गरेकै हुन्छ । कतिपय अवस्थामा साइड इफेक्ट ठूलै भए पनि बिरामीलाई उक्त औषधी नदिई नहुने अवस्था आइपर्न सक्छ । बिरामीको ज्यान जोगाउनु चिकित्सकको प्रथम दायित्व/कर्तव्य हो, अनि नैतिक बन्धन पनि ।
रोगीमाथि औषधीहरूको नकारात्मक प्रभाव कसरी न्युनीकरण गर्ने वा त्यसको खराब नतिजालाई कसरी राम्रोमा परिणत गर्ने भन्ने सोच, कौशल र दायित्व स्वयम् चिकित्सकको हुन्छ । तसर्थ चिकित्सकले आफूले दिएको औषधी सम्बन्धित बिरामीलाई मेल खाँन्छ/खाँदैन, अध्ययन गरेकै हुन्छ ।
निम्न अवस्थामा चाहिँ नेटले सहयोगीकै भूमिकाखेल्न सक्छ :
चिकित्सकीय सुझावको पुनर्पुष्टि
चिकित्सकको सल्लाहलाई बेवास्ता गरेर गुगलकै सूचनालाई आधिकारिक मान्दै उपचार गर्ने/गराउनेतर्फ लाग्नु सोह्रैआना गलत हो । गुगलको सूचनालाई पूरक मानेर त्यसका आधारमा चिकित्सकसँग सल्लाह गर्नुचाहिँ राम्रै हुनसक्छ । गुगलमा दिएको सूचनाले रोग सम्बन्धी तपाईंको जानकारी बढाउन धेरै हदसम्म मद्दत गर्छर् । विशेषतः छोटो समयको परामर्शमा चिकित्सकलाई सबै प्रश्न सोध्न नमिल्ने परिस्थितिमा तयारीका साथ जाँदा परिस्कृत रूपमा प्रश्न राख्न भने गुगलले मद्दत नै गर्छ।
चिकित्सकले व्याख्या गरेकोभन्दा फरक तथ्य तपाईंले पत्ता लगाउनुभए ऊक्त कुरा नलुकाई चिकित्सकसामु राख्न सक्नुहुनेछ । यसले बिरामी र चिकित्सक दुवै गुमराहबाट मुत्त हुन सक्नेछन् । इन्टरनेटमा जसले पनि, जहिले पनि र जेसुकै पनि पोस्ट गर्न मिल्ने भएकाले त्यस्ता सूचनाको विश्वसनीयतामा जहिले पनि प्रश्न उठेकै हुन्छ । तसर्थ तपाईंले कुन सूचना कस्तो स्रोतबाट प्राप्त गर्न खोज्नुभएको हो, सोचाहिँ आफैँलाई सोध्नुपर्छ । किनकि गुगल स्वयम् चिकित्सक होइन, यसले त औसत रूपमा रोगका बारेमा सामान्य जानकारीमात्रै दिन्छ ।
के विश्वास गर्ने, के नगर्ने ?
सबै अनलाइन सूचनालाई झट्टै र ठयाक्कै विश्वास गर्न सकिँदैन । फेरि गुगलमार्फत चिकित्सा सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्ति या समूह चिकित्सकीय रूपमा दक्ष र योग्य होलान् भनेर ठोकुवा गर्न पनि सकिँदैन । तपाईंलाई चिकित्सकले दिएको चाहिँ पहिलो विश्वस्त सुझाव हो ।
इन्टरनेटमा प्राप्त सूचनाकै आधारमा निर्णय गर्ने बानीका कारण धेरैमा ठूलो नकारात्मक असर परेको पाइन्छ । यस्तो असरलाई साइवर कोन्ड्रिया भनिन्छ । आफ्नो रोगका लक्षण गुगलमा खोजी स्वनिर्णयमा रोगको निदान र उपचार गर्नेमा आउने समस्या हो यो । यो प्रक्रिया अपनाउँदा कहिलेकाहीँ आफूमा देखापरेको रोगको सामान्य लक्षण पनि कुनै खतरनाक रोगसँग मिल्न सक्छ । र रोगी भयानक रूपमा तनावमा पर्ने वा मानसिक रोगी बन्नसक्ने सम्भावनासमेत हुन्छ ।
उदाहरणका लागि, कसैले वाक्वाक् लाग्दा त्यसको कारण नेटमा खोजेमा गर्भवती भएको वा थाइराइड सम्बन्धी गडबडी देखिएको बुझाउँछ । तर त्यस्तो समस्या आमाशयको सामान्य गडबडीमा समेत देखिन्छ । अनि भएन त व्यक्तिले अनाहकमै अनावश्यक विषयतिर सोच्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना ?
यदाकदा हामीले त्यस्ता घटनासँग पौंठेजोरी खेल्नुपर्ने नै हुन्छ, खेलिराखेका हुन्छौं । केही उदाहरणीय घटना :
गत डिसेम्बर अन्तिमसाता नेपालमा ट्रेकिङ गरिरहेका २५ वर्षीय एक अमेरिकी नागरिक लेक लाग्ने रोग (हाई अल्टिच्युड सिकनेस) का कारण श्वास–प्रश्वासमा कठिनाइ भएर र शरीरभर व्यापक डाबर/खटिरा आएर जटिल अवस्थामा अस्पताल ल्याइए । आवश्यक आकस्मिक उपचारपश्चात् उनलाई अस्पताल भर्ना गरियो ।
ग्यास्ट्राइटिस र श्वास–प्रश्वास नियमन गर्ने औषधीका साथ उनलाई प्रतिजैविक औषधी (एन्टिबायोटिक्स) पनि चलाइयो । तीन दिनको औषधोपचारपछि उनी पूर्णतया निको भए र डिस्चार्ज पनि । डिस्चार्जका दिन उनलाई दिइएको प्रतिजैविक औषधी थप दुई दिन खानुपर्ने सल्लाह दिइयो । तर उनले थप औषधी खान इन्कार गरे । कारण थियो, गुगलले भने अनुसार उक्त औषधीले पार्ने साइड इफेक्ट । जुन औषधीले उनी निको भए, त्यही औषधी थप दुई दिन लिन उनले मानेन् र अमेरिकातर्फ हुइँकिए ।
अर्को उदाहरण अमिट्रिप्टिलिन भन्ने औषधी ज्यादा टाउको दुखाइ र मानसिक चिन्ता कम गर्न दिने गरिन्छ । कहिलेकाहीँ मांसपेशीको दुखाइ निवारणमा समेत यसको प्रयोग गरिन्छ । तर बिरामीले यो औषधी किन प्रयोग गर्ने भनेर नेटमा हेर्न थाल्यो भने मानसिक रोगमा प्रयोग गरिने औषधी भन्ने सूचना पाएर चिकित्सकसँग ठाडै झगडा गर्न आइपुग्छ ।
त्यस्तै प्रिग्यावलिन नामक औषधी छारेरोगको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि स्नायु सम्बन्धी पीडामा समेत यसको प्रयोग गरिन्छ । नसाका कारण शरीरका अंगहरू दुख्ने समस्याका धेरै अवस्थामा यसको प्रयोग हुन्छ । एक पटक यही औषधी एकजना बिरामीमा प्रयोग गर्दा उनी ‘मलाई छारेरोगको औषधी दिने ?’ भनी हामीसँग झगडा गर्न आएका थिए ।
गुगल हाल आएर मान्छेहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक जानकारीको स्रोत बन्नथालेको पाइन्छ । तर यो भरपर्दो र विश्वसनीय भने हुँदैन । यसले केवल मान्छेमा थप शङ्का–उपशङ्का बढाउने, चिकित्सकको मौलिक चिकित्सा पद्धतिमा भाँजो हाल्ने र रोगीलाई अप्ठ्यारो परिस्थितितिर धकेल्ने सम्भावना बढाउँछ । कारण, डाक्टर गुगलले दिएका लक्षणहरू केवल साङ्केतिकमात्रै हुनसक्छन् । यसले आमरोगका लक्षण र औसत निदानमात्र बताउँछ ।
रोगीको खास रोगको लक्षण र उपचार बताउन सक्तैन । यो चिकित्सक होइन, सामान्य सूचना प्रवाहकमात्र हो । गुगल डाक्टरले प्रस्तुत गरेको लक्षणहरू अद्यावधिक नहुन सक्ने, चिकित्सा विज्ञानले परिमार्जन गरेका नवीनतम तथ्यहरू यात उपलब्धै नहुने, भैहालेमा पनि पर्याप्त नहुने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ ।
तसर्थ कुनै रोग लाग्दा डाक्टर गुगलकै सल्लाहमा भर परेर चिकित्सकको सल्लाह–सुझाव र औषधोपचारलाई नकार्दा भयावह समस्या आइपर्न सक्छ । यसबारे सचेत हुने/नहुने व्यक्तिविशेषकै निर्णयमा भर पर्छ ।
डा. नेपाल हाड–जोर्नी विशेषज्ञ हुन् भनेमैनाली सञ्चारकर्ता ।
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ ०८:३७